Govt Allocates K25 Bln for 'Cash for Work' Program | Myanmar Business Today
HomeBusinessGovt Allocates K25 Bln for 'Cash for Work' Program
Govt Allocates K25 Bln for ‘Cash for Work’ Program
The Ministry of Agriculture, Livestock, and Irrigation will use K25 billion in Cash for Work program, which, as part of the economic recovery plan in post-COVID-19 times, will create jobs for people in the rural areas.
The project will be implemented in 2,488 villages across the countries, especially in the villages and village tracts with bigger vulnerabilities, most or moderate affected ones, higher multidimensional index villages, and those that have the highest number of returned immigrant workers.
The ministry will use K1.44 billion for livestock and veterinary, K60.77 million for safety for fishermen, K1.138 billion in irrigation and water usage, K204 million for industrial-based agriculture, and K600.21 million for SMEs.
In addition, the ministry, withaEUR70 million assistance from the European Union, also plans to implement the reform program in the nutrient.
The proportion of the population living below the poverty line declined from 48.2 percent in 2005 to 24.8 percent in 2017. Despite population growth, the number of poor people declined from 18.7 million in 2005 to 11.8 million in 2017.
COVID အလွန်ကာလ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရေး တွင် ကျေးလက်ဒေသအတွင်းCash For Work စီမံကိန်းအတွက် ကျပ်သန်း ၂၅၀၀၀ သုံးစွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့် အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးလှထွန်းက ပြောသည်။
ယင်းစီမံကိန်းကို ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသော ကျေးရွာပေါင်း ၂၄၈၈ ရွာတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကာ ကျေးရွာများတွင် ကျပန်း အလုပ်သမားများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုကျေးရွာများ၊ ကူးစက်ရောဂါ ဆိုးရွားစွာ (သို့မဟုတ်) အတော်အသင့် သက်ရောက်မှုရှိသော ကျေးရွာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူချောမွေ့ မှုနှင့် နယ်မြေလုံခြုံမှုရှိသောကျေးရွာ၊ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများစည်းလုံးညီညွတ်ပြီး တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်လိုသော ကျေးရွာ၊ Multiy – Dimensional Index များသော ကျေးရွာ၊ ပြည်ပသို့သွားရောက်သောအလုပ်သမား အများဆုံး ပြန်ရောက်နေသော ကျေးရွာများတွင် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အလုပ်သမား အင်အားအသုံးပြုသော လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ကာ Cash For Work စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ကျပ် ၂၅ ဘီလီယံတွင် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေး အတွက် ကျပ်သန်း ၁၄၄၀၊ ရေလုပ်သားများ ပင်လယ်ပြင် ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး သင်သန်းအတွက် ကျပ်သန်း ၆၀ ဒသမ ၇၇၀၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချရေးအတွက် ကျပ်သန်း ၁၁၃၈ ဒသမ ၈၁၀၊ စက်မှုလယ်ယာ ဦးစီးဌာနအတွက် ၂၀၄ သန်း၊ အသေးစားစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ကျပ်သန်း ၆၀၀ ဒသမ ၂၁၀ သုံစွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထိုအပြင် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန သည် အီးယူထောင့်ပံ့ငွေ ယူရိုသန်း ၇၀ ဖြင့်အဟာရကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိုမကြာမှီ လက်မှတ်ရေးထိုးအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစီမံကိန်း သည် COVID − 19 ကြောင့်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက်ပါ ရန်ပုံငွေ သုံးစွဲရန် ညှိနှိုင်းပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Previous articleState Counsellor Urges Fishery Sector to Enter Global Market
Next articleMyanmar-China Border Trade Yet to Resume Normal